Ama-Computer Networks ama-SME: Isingeniso | Kusuka kuLinux
phico | | I-GNU / Linux, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-2 nohhafu singabikho kule ndawo yedijithali, esikujabulela kakhulu ukufunda izindatshana zakho, sibuya ukuzoqhubeka nokunikela kolwazi lwethu oluthobekile emhlabeni weFree Software.
Njengoba besishilo njalo, uzothola kuphela i- "One more Entry Point" yesihloko ngasinye. Asenzi sengathi sazi yonke into, futhi asenzi sengathi sithathe indawo yezinto ezinhle zokutadisha esizithola kumaManuwali noma eyodwa yomyalo ngamunye; kweminye imibhalo ekhishwe eWWW Village; izincwadi ezikhethekile; i-wikis enikezelwe ezinhlelweni noma ezinhlelweni ezisebenzayo; izincwadi, njll.
Asinaso isikhathi noma ulwazi olwanele lokushicilela okokusebenza okuhle kakhulu okufana nencwadi ngefomethi ye-PDF «Ukucushwa Kweseva Nge-GNU / Linux«, Umbhali UJoel Barrios Dueñas, iqoqo lokuthi sincoma kakhulu ukutadisha kwalo ngokucophelela -okungekhona ukufunda okusheshayo kuphela nokuqalisa, kulabo abasebenzisa i-CentOS, OpenSUSE, Debian, noma okunye ukusatshalaliswa kwe-LINUX.
Sizoqala uchungechunge lwezihloko ku Amanethiwekhi ekhompyutha, Kudingeka kakhulu ekusebenzeni okufanele kwezinkampani ezincane neziphakathi noma Ama-SME, njengoba igama layo libhaliswe emazweni akhuluma iSpanishi.
Siyethemba ukuthi umzamo nesikhathi esinikezelwe ekulungisweni kwazo zonke izindatshana sizonxeshezelwa ngokufundwa kwakho kanye nosizo olumele.
2 Imibhalo esivele ishicilelwe
2.1 Indawo yokusebenza
2.2 Ukwenza izinto ngamehlo
2.3 Bopha, i-Isc-Dhcp-Server, ne-Dnsmasq
2.4 Ingqalasizinda, Ukufakazela ubuqiniso kanye Nezinsizakalo
3 Ezinye izihloko zihlanganisiwe futhi kuzoxoxwa ngazo
3.1 Ukufakazela ubuqiniso kanye Nezinsizakalo Zenethiwekhi eziqondiswe ku-SME
4 Isiphakamiso sokusebenzisana
Labo abaphethe ukukhonza lolu hlobo lwenethiwekhi, noma ngabe iziqu zabo ngabaphathi, Abaphathi benethiwekhi, Abaphathi bezinhlelo, I-Sysadmin, noma elinye igama, sinesibopho sokuhlinzeka ngendlela esobala kumsebenzisi wezindawo zokusebenza, uchungechunge lonke Izinsizakalo Zenethiwekhi kunjani Ukulungiswa Kwegama Lesizinda; Ukunikezwa Okunamandla kwamakheli e-IP; ukufinyelela kwe-inthanethi; Imiyalezo kanye Nezinsizakalo Zemeyili Ngogesi; Isevisi yokufakazela ubuqiniso yomsebenzisi nomshini, kanye nohlu olude lwezinye izinsizakalo ezizoncika esikalini nasenhlosweni yeNethiwekhi.
Sizothola izinhlobo ezingafani, ubukhulu, nezinhloso zama-Computer Networks: ezinye zilula kanti ezinye ziyinkimbinkimbi; abanye ukuhlinzeka ngezinsizakalo zeHhovisi ne-Accounting njengokusemqoka; abanye bakhethekile emsebenzini weComputer Aided Design, noma i-CAD; amanethiwekhi emishini nabasebenzisi abakhethekile ezinhlelweni zezinhlelo ezahlukahlukene, ngamafuphi, i-El Mar.
Ububanzi kanye nokuqukethwe yi-Computer Networks kunjengoba uChristopher Columbus asho: "La Mar Oceana." Isibonelo esiphezulu, ngombono wami: IWWW Village noma i-Intanethi.
Kungaba ukuhlanya, ukuzama ukuchaza ukuhlukahluka ngakunye kwamanethiwekhi, kanye nezinsizakalo ngasinye esingazidinga ngenethiwekhi ethile. Futhi asihlanyi, noma okungenani yilokho esikucabangayo. 😉.
Ngakho-ke, sizogxila kokujwayelekile kakhulu okuzoba yi Isigaba «C» Inethiwekhi Yendawo Yasendaweni, enezindawo zokusebenza zayo eziningi ezinezinhlelo ezisebenza ngeMicrosoft © Windows, nangokufinyelela kwe-Inthanethi. Sizoxoxa ngezinsizakalo ezibalulekile futhi ezisetshenziswe kakhulu.
Imibhalo esivele ishicilelwe
Uhlu lwe izindatshana ezishicilelwe -kuhleleke okunengqondo nokuzimele kosuku lokushicilelwa- oluzobuyekezwa masonto onke, yilokhu okulandelayo:
Ukusatshalaliswa ngokuhamba kwesikhathi kweLinux Distribution
Ukufakwa kwendawo yokusebenza
I-KDE esheshayo nenhle evulekileSUSE 13.2 Harlequin
Ukwenza izinto ngamehlo
Ukusebenza ngobuhlakani ku-Debian: Isingeniso
I-Qemu-Kvm + Umphathi we-Virt ku-Debian
Imiyalo ye-virt ku-Debian
I-Virt-Manager kanye ne-virsh: Ukuphathwa Kwekude ngeSSH
I-CentOS 7 Hypervisor I
ICentOS 7 Hypervisor II
Amanethiwekhi we-SME: ukusika kokuqala kokubonakalayo
Bopha, i-Isc-Dhcp-Server, ne-Dnsmasq
I-DNS ne-DHCP kuvuliweSUSE 13.2 "Harlequin"
I-DNS ne-DHCP ku-CentOS 7
I-DNS ne-DHCP ku-Debian 8 «Jessie
I-Dnsmasq ne-Active Directory®
Ingqalasizinda, Ukufakazela ubuqiniso kanye Nezinsizakalo
[Umbono] Ingqalasizinda Nemisebenzi Yokufakazela Ubuqiniso
Ukucushwa kwenethiwekhi nokuphathwa
Ukuqinisekiswa kwe-squid + PAM
Uma sibheka kahle, sizama ukunikela ngokuningiliziwe kokuthi ungabhekana kanjani nokuqaliswa kwe-SME Network, sithathe njengesiqalo ukusatshalaliswa okubili okugxile kakhulu kwezamabhizinisi -I-CentOS / Isigqoko Esibomvu y vulaSUSE / SUSE- kanye nokusatshalaliswa okujwayelekile okukhona ku-Linux Universe, okungumbono wethu ukuthi Debian.
Ukuhleleka kwezixhumanisi ezingenhla kwesinye isikhathi akuhambisani nokulandelana kwesikhathi maqondana nesikhathi isihloko ngasinye esashicilelwa ngaso. Esikhundleni salokho, kuphendula intshisekelo yethu yokuthi zifundwe ngokulandelana. Uma sibheka kahle sizobona:
Okokuqala sisho ukuthi kungani sikhethe ifayela le- ama-distros okukhulunywe ngenhla, ngokususelwa ekusatshalalisweni kwesikhathi sokusatshalaliswa kweLinux.
Ngemuva kwalokho sizenza indawo yokusebenza efanele iSysAdmin, kokubili eDebian naku-openSUSE.
Kamuva sizofunda ukwenza i-Functional Hypervisor, ezosekela wonke amaseva abonakalayo esiwadingayo.
Ngemuva kwalokho siba yingxenye ye-Infrastructure Server. Sithi "ingxenye" ​​ngoba ifayela le- Iphrothokholi Yesikhathi seNethiwekhi Sizoyibona lapho sithinta isihloko sobuqiniso.
Ezinye izihloko zihlanganisiwe futhi kuzoxoxwa ngazo
Ukufakazela ubuqiniso kanye Nezinsizakalo Zenethiwekhi eziqondiswe ku-SME
Ukuqinisekiswa kwe-PAM. Ukuqaliswa kwezinsizakalo zamanethiwekhi, nokufakazela ubuqiniso nokugunyazwa okuvela kokuqinisekisa kwabasebenzisi ababhaliswe kuseva eyodwa:
Iseva isuselwa ku- I-CentOS 7 -nezinhlanganisela ezimbili zenethiwekhi- nedeskithophu MATE, NTP, dnsmasq, ICentOS / iRed Hat Firewall, Umgwaqo - Gateway yokufinyelela i-Inthanethi, Ukuphathwa Komsebenzisi ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi sokuqhafaza, Squid, njll.
Ukuphathwa komsebenzisi kwasendaweni ngezinqubomgomo zephasiwedi.
Imiyalezo yeseva I-Prosody - XMPP olandelwayo
Mhlawumbe, Insizakalo yeposi
Insiza Yokufinyelela Kwesikhombi isuselwa ku-OpenLDAP
Isilawuli Sesizinda - Uhla lwemibhalo olusebenzayo olususelwa ku-Samba 4 okungenani kokuphakelayo okubili okukhethiwe.
Iseva yefayela yama-Microsoft © Networks asuselwa ku-Samba4
Isevisi yokudlulisa ifayela eseProftpd
Ezinye izinsizakalo ezingabalulekile kangako, kepha ezisetshenziswa kabanzi
Kuma-Initiates in Service Administration noma kulabo abafuna ukufunda ngalo msebenzi, sincoma ngokuqinile ukuqala kusukela ekuqaleni, nangendlela ehlongozwayo.
Labo abafuna ukubona indawo yonke ebanzi kakhulu kunaleyo ehlongozwayo, bangavakashela izingosi ezahlukahlukene ze-Intanethi ezinikezelwe ezihlokweni ezikumaNethiwekhi kanye Nezinsizakalo. Kunenqwaba yazo ngeSpanishi, isiNgisi, kanye nasezinhlotsheni ezahlukahlukene zezilimi esikhuluma ngazo thina bantu kule planethi.
Ngaphezu kwalokho, sihlela ukubhala uchungechunge oluncane lwama-athikili I-FreeBSD ukuze lena yaziwe kancane I-Giant Engaziwa Yesoftware Yamahhala.
Uma noma iyiphi iNyuvesi, iSikole, Isikhungo noma iNkampani inesifiso sokusebenzisa i-Distance Course ezihlokweni ezihlanganisiwe kanye nalezo ezidingekayo ukufaka phakathi, sicela usibhalele ngaphandle kokungabaza okuncane noma ukubambezeleka. Nakhu senzelwe wena.
UFederico Antonio Valdes Toujague
Sikulindele kwizitolimende zethu ezilandelayo!
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ama-Computer Networks ama-SME: Isingeniso
Sawubona, Good Fico ... uchungechunge lwangaphambilini luhle kakhulu futhi ngilubheke ngabomvu lolu ...
Sicela uqiniseke ukuthi isigaba se-imeyili akusona esithi "Kungenzeka", isitatimende!
Ngikufisela inhlanhla ngochungechunge, ngizolulandela.
Kokuqukethwe okuhle kakhulu engikufundile, ngibheke phambili kokulandelayo. Sanibonani Fico!
Isingeniso esihle kakhulu, ngiqala emhlabeni wokuphathwa kwenethiwekhi futhi ngiyaqiniseka ukuthi lolu chungechunge oliphakamisayo luzoba usizo olukhulu futhi lukukhombe.
Ngiyabonga nonke kakhulu ngokuphawula egameni leqembu leDesdeLinux. Ngosizo olungabalulekile lwamaLuigys ahlonishwayo, ngicabanga ukuthi singajabulela isitolimende esilandelayo, uma kungenjalo namuhla, kusasa.
Ubhontshisi weHanibball kusho
Kuhle kanjani, lokhu kungilingana negilavu, ngilinde ukushicilelwa.
Phendula ku-Hanibball Bean
Lolu chungechunge luthembisa okuningi, okungaphezu kokuhlangenwe nakho okuqinisekisiwe kukaFico, okungezwe endleleni yakhe enhle kakhulu yokubhala nokubhala phansi, kwenza umuntu akhule olwazini kabanzi.
Ngibonga kakhulu uFico ngentando yakho emihle nangegalelo lakho elihle kakhulu.
I-Ale yabantuOS kusho
Okuthunyelwe kuhle kakhulu, njengenjwayelo, kusilethela okungcono kakhulu kobuhlakani bawo.
Phendula ku-Ale humanOS
Kuhle kakhulu .. ilinde okulandelayo, imininingwane enhle kakhulu!
Ngisithandile impela isiphakamiso esilethwa nguFico, sekuyisikhathi eside ngafunda izindatshana ezenziwe nguwe. Ngempela konke empilweni kuqala ngephuzu. Kusukela ekuqaleni futhi ngenxa yalolu chungechunge osekuvele kuliqiniso kimi, ngoba awukaze usiphoxe; Abaphathi benethiwekhi be-SME bazowukhulisa kakhulu umbono wethu.
Njengoba iHanibball Bean ibingasho ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ilungele ngokuphelele, hhayi kuphela labo abaqala, ngisho nalabo abanolwazi ngiyazi ukuthi bazoqhubeka. Sl2 futhi sanibonani nonke.
Ah, ngikhohliwe ukusho ukuthi uchungechunge oluncane lwama-athikili aphathelene neFreeBSD luyiziphakamiso zakho ezintsha kunazo zonke.
Siyabonga ngokuphawula, mngani uCrespo88 !!!. Sizobona ukuthi abathandi beLinux banentshisekelo kuFreeBSD Free Software. Sizoba nethuba lokuthola ukuthi ngabe kunjalo yini.
Sawubona Fico: Ngifunde amagama amasha eposi elithi “Network Networks for SMEs - Introduction” futhi ngiwuthande kakhulu umqondo wokuthi “… ukubhala uchungechunge oluncane lwezihloko ezikhuluma ngeFreeBSD ukuze ngazi kancane le Giant Engaziwa YeSoftware Emahhala . » usebenzisa amagama akho. Ngakho-ke nginikeza umfutho wokuqala wokuqala ukwenza izinto kulokhu kusatshalaliswa kwamahhala kwe-UNIX.
Nginentshisekelo nakokuthunyelwe okungu-2 mayelana nokufakazela ubuqiniso.
Futhi kuzinsizakalo zenethiwekhi eziqondiswe ku-SME, ikakhulukazi ku- "File Transfer Service ngokususelwa ku-Proftpd" ngokuya ngamathuba akho ukubona ukuthi kungenzeka yini ukusebenzisa ubuqiniso usebenzisa abasebenzisi be-Active Directory ngokususelwa kuSamba 4 esikhundleni sabasebenzisi bendawo.
Ungitshele ukuthi ngikukhumbuze izindatshana esezivele zishicilelwe ku-DNS Bopha indlela yokuthi ungakusebenzisa kanjani ukubukwa komphakathi.
Akukho engikubheke ngabomvu… ..
Sanibonani IWO!. Sizobona ukuthi sisanelisa kanjani isicelo sakho. Qhubeka nathi ukuthi ngeke uzisole!,
Ukufakwa kwe-Workstation - Amanethiwekhi wekhompyutha wama-SME